को हो त्यो पत्रकारलाई ठोक्ने शक्तिशाली ? | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
को हो त्यो पत्रकारलाई ठोक्ने शक्तिशाली ?
२०७१ पुष १७, बिहीबार ०१:५६ गते
गत मंसिर ४ गते साँझैमा भरतपुरमा एक जना नारायणप्रसाद अधिकारी नामका सञ्चारकर्मीलाई धारिलो हतियारले आक्रमण गराइयो । नारायणका अनुसार आक्रमणकारी मोटरसाइकलमा आएका थिए । उनले नम्बरमात्रै देखे, अरु देखेनन । चितवनका केही स्वास्थ्यकर्मीहरु हदभन्दा बढी पैसाप्रेमी भए पनि बहुसंख्यकचाहिँ मानवताका पक्षधर भएका कारण ती नारायण भाइको ठीक समयमा उपचार सम्भव भयो र तिनले कलिलै उमेरमा स्वर्ग देख्न परेन । एउटा सञ्चारकर्मी जो आफनो काम सकेर घरतर्फ विश्राम गर्न गइरहेको थियो, उसलाई बेफवाँकमा आक्रमण गरियो ।
आज एक महिना कटेर पनि अर्को हप्ता थपियो, तर पर्दापछाडिबाट नारायणलाई आक्रमण गर्न आदेश दिने सक्कली अपराधीलाई नेपाली जनताले देख्न पाएनन । अपराधीलाई पक्राउ गर्ने र सजाय दिलाउन मुद्दा दर्ता गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीले आज पनि निकै तदारूकतासाथ अपराधी खोजिरहेको बताएको छ । सञ्चारकर्मी नारायणको परिवार नेपाल पत्रकार महासंघ केही दिन चम्कियो, यतिबेला भने सुतेको छ, पूरै निदाएको छ । यतिबेला हेर्दा यस्तो लाग्छ, पत्रकारमाथि आक्रमण भएकै थिएन । केही भएको थियो भने पनि ख्याल–ख्यालमात्रै भएको थियो । यो सन्दर्भमा पुलिस निदाएजस्तो देखिन्छ । पत्रकारहरु त निदाइसके, मानवअधिकारवादी भन्ने गरिएका विभिन्न राजनीतिक दलका दासहरुले समेत ‘चुँ’सम्म आवाज उठाएनन । नागरिक समाज मरेको धेरै भइसक्यो । साँझ–बिहान गिठा र भ्याकुर खोज्ने चेपाङहरु बोल्ने कुरै भएन । राजनीतिक दलका नेताले आवाज उठाउने कुरै भएन । यिनीहरु आफू ठीक अरु गलत भन्नमै जिन्दगी खेर फाल्छन । शिक्षण पेसाकालाई चासो हुने कुरै भएन । तलब बढाइदेऊ, घरपायक सरूवा गराइदेऊ बाहेक यिनको ध्यान अन्त जाने कुरै भएन । पत्रकार आक्रमण निजामती कर्मचारीको चिन्ता र चासोको विषय भएन ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीहरु कोही तलब पकाउन व्यस्त छन, कोही बिरामीलाई तर्साएर पैसा झार्न तल्लीन छन । यिनलाई एक पत्रकार मरोस वा बाँचोस, के मतलब ? औषधि व्यवसायीहरुमध्ये इमानदारहरु तोकिएको कमिसन प्रतिशतमा चित्त बुझाएर आफू र आफनो परिवारको ज्यान धानिरहेका छन । बेइमानहरु मुन्द्रे, झयाम्टे र लागू पदार्थका अम्मलीहरुलाई टयाप्स र इन्जेक्सन बेचेर दाम कमाइरहेका छन । यिनलाई एउटा सञ्चारकर्मीको हातका औँला काटिँदा के मतलब ? कुखुरा व्यवसायीहरु छन । अन्डा व्यवसायीहरु छन । यी बिचराहरुको ध्यान सधैँभरि भारतबाट अवैध चल्ला कसैले नेपाल छिराइ पो हाल्छ कि ? अन्डाको मूल्य घटी पो हाल्छ कि वा मासुको मूल्य घटछ कि भन्ने र कतै फेरि पहिलाकै जस्तो बर्ड फलुको महामारी फैलिने पो हो कि ! यस्तै–यस्तै चिन्तामा डुबिरहन्छन । यिनलाई देशभरिमा कहीँकतै कुनै एक पत्रकारले पेटभरि खान पाएनन वा घाइते भए वा मरे, यिनलाई चासो दिने फुर्सद हुँदै हुँदैन ।
सुन व्यापारीहरु बिहानदेखि बेलुकासम्म हजार र पाँच सयका नोट थुक लाएर गन्नमै व्यस्त हुन्छन । तोला, लाल, हजार र पाँच सयका नोट, रसायन, ज्याला, जर्ती भन्दाभन्दै यिनको जिन्दगी बित्छ । यस्तो लाग्छ, यिनलाई त बाहिरी दुनियाँमा के भइरहेको छ, केही थाहा छैन । न पत्रिका पढने फुर्सद, न टेलिभिजन हेर्ने, न त रेडियो सुन्ने नै । यति बेफुर्सदी मान्छेहरुले सायद सञ्चारकर्मी नारायणप्रसाद अधिकारी घाइते भएको थाहा पाएका पनि छैनन होला । यस्ता खासखास मान्छेहरुलाई त एक पत्रकारमाथि आक्रमण भएको, अत्याचार भएको चिन्ता, चासो र खबर छैन भने सडकको छेउमा चिसो रात बिताउने, बिहान–बेलुकाको छाक टार्न रिक्सा चलाउने, ठेला धकेल्नेहरुलाई के थाहा कि आज एक सञ्चारकर्मीको शरीरबाट कुनै अपराधीले रगत पोखिदिएको छ, हात काटिदिएको छ । नहुनु पथ्र्यो, अपराध भयो । तर, हुनु पथ्र्यो न्याय, त्योचाहिँ भएन । त्यो न्याय के हो ? पर्दापछाडि बसेर आक्रमण गर्नका लागि आदेश जारी गर्ने शक्तिशाली, धनवान अपराधीको गिरफतारी । तर, न्याय महिनादिन कटदासमेत प्राप्त भएन । किन न्याय पाएन एक सञ्चारकर्मी नारायणप्रसाद अधिकारीले ?
अपराधका प्रकार र न्याय सम्पादनसम्बन्धी केही चर्चा गरौँ, ताकि बुझनका लागि मद्दत मिलोस । मानव दुनियाँमा आजसम्म भएका अपराधसम्बन्धी गतिविधि अध्ययन गरेका विज्ञहरुका अनुसार आजसम्म मूलतः तीन शीर्षकमा अपराध भएका छन । तीमध्ये शीर्ष कारण नम्बर एक हो– धन । मान्छे भौतिक सुविधामा रमाउन चाहने विशेषता लिएर जन्मिएको हुँदा मान्छेको दुनियाँले भौतिक साधनको साटासाटको माध्यमका रुपमा एक नम्बरमा रूपैयाँपैसालाई स्वीकारेको हुँदा विश्वभरिका मानिसहरु पैसाकै पछि लागेका छन र त्यसकै लागि मारकाट गरिरहेका छन । विश्व मानव समुदायका सदस्य नेपाल भएको हुँदा नेपाली पनि पैसा प्राप्तिको खेलमा गतिलैसँग लागेका छन । यसरी व्याख्या गर्दा अपराधको बीउका रुपमा यही पैसा देखिएको छ ।
अपराध हुने कारण नम्बर दुईमा रहेको छ– पद । राजनीतिक वा सामाजिक पदका लागि समेत विश्वभरि मारकाट र षडयन्त्र भएको देखिन्छ । यो षडयन्त्र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि लगातार भएको देखिन्छ । जंगबहादुरले शासन हत्याउनेदेखि लिएर राजा वीरेन्द्रको हत्यासहित उनको वंश विनाश, जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या आदि आदि सयौँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि पदका लागि संसारमा अपराध हुन्छ र नेपालमा पनि भएको छ ।
अपराध हुने अर्को शीर्षक हो– सम्भोगको हदभन्दा बढी चाहना । अर्थात, महिलाको आकर्षण पुरूषप्रति र पुरूषको आकर्षण महिलाप्रति । एक महिलाले पुरूष प्राप्तिका लागि र प्रहरी अघि बढ । न्यायप्रेमी जनताको साथ तिमीलाई प्राप्त अवश्य हुने छ । चाँडो अघि बढ । त्यो लुकेको शक्तिशाली भनिने अपराधी टाढा छैन, तिमीहरुकै छेउछाउमा हुनुपर्छ ।